20 | August | 2018 | OromianEconomist
Shira habashaan Afaan Oromoo irratti xaxamaa jiru hayyootni Oromummaa qaban mormaniiru August 20, 2018
#Oolmaa Har’aa: on the Roadmap and Afaan Oromoo issue
“Shira habashaan xaxamaa jiru, hayyootni Oromummaa qaban mormaniiru. Shirri ‘education road map’ haaraatiin xaxamee, “Afaan dhalootaan barachuun hanga kutaa 6tti ga’aadha, Afaan Amaaraa immoo kutaa 1 eegalee kennamuu qaba” jedhu, sabboontota Oromoo, pirezedaantota yuunivarsiitiitiin mormii guddaan irratti ka’eera. Gaaffileen ka’aa turanis:
1. Dhuguma Afaan dhalootaan barachuun qulqullina barnootaa miidheeraa?
2. Qorataan tokko akkamittiin mirga heeraan naannoleef kenname diiguu danda’a?
3. Afaan Oromoo ol guddataa deema jennee utuu abdannuu, isin akkamittiin hanga 6 qofaatti murteessitu?
4. Abbaan dhimmaa Afaanii, warra afaan Sana dubbatu ta’ee utuu jiruu, akkamittiin qaamni afaanicha hin beekiin murtee dabarsuu danda’a?
5. Qorannoon kun haaromsaan dura waan eegaleef, akkamittiin amanamuu danda’a?
6. Compositioniin qorattootaa sirriidha?
7. Dookumentii kana erga waggaa 3 dura eegaltanii maaliif hanga ammaa dhoksitan? fi gaaffilee kanneen biroo gaafataa oolaniiru. Pirezedaantota yuunivarsiitilee Oromiyaa keessaa dhufanii dhimma Oromoo miidhu balaaleffataniifi kan habashota gammachiisuuf dubbatan adda baasuun saaxilaa deemuunis dirqama. Kanaaf, gantoota akka Dr Saamu’eel Kiflee(kan ministeera barnootaa keessaa hojjetu), Silashii Geetahuun(kan dhiyeenya koree giddugaleessaa DHDUO keessaa ari’ame) fi Dr Jeyluun Umar(itti aanaa pirezedaantii yuunivarsiitii Finfinnee), namoota akka qorannoon kun guutummaatti hojiirra ooluuf hirmaattota walga’ii har’aa sossobaa oolanidha. Kanaaf, dhimma Oromoo keessa galanii murteessaa waan jiraniif akka irraa of qusatan jenna. Dr Abiyi immoo rakkoon qulqullina barnootaa jiraachuu malee Shira habashoonni xaxuuf deeman kana Waan hubate hin fakkaatu. BBO immoo dhimma qorannoo kana quba akka hin qabne odeeffanneerra. Walumaagalatti, hayyuun Oromoo, qorannoo Oromoo miidhu xiinxalee yoo hin mormine, Oromoof hayyuu ta’uu hin danda’u.
FB irratti share taasisuun Oromoo nuuf dhageessisi maaloo.”